काठमाडौं । ‘सेल्फी किङ’ पछि अभिनय गरेकै थिएनन् । केही चलचित्रमा कुरा चलिरहेको थियो । केही स्क्रिप्ट हातमा थिए । केही कामै नलाग्ने स्क्रिप्ट, केहीमा परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्थ्यो । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना महामारी नेपालमा पनि प्रवेश गर्यो ...
दिवेशले अमेरिकन आइडलमा गीत गाउँदा ‘जज’का आँखा रसायो
११ चैत्र २०७६, मंगलवार २०:३८ Nabin BabuLeaveaComment on दिवेशले अमेरिकन आइडलमा गीत गाउँदा ‘जज’का आँखा रसायो
काठमाडौं । अमेरिकन आइडलमा सहभागिता जनाएर चर्चा कमाइरहेका नेपाली मूलका गायक दिवेश पोखरेल ‘आर्थर गन’ ले गीत गाउँदा निर्णायकका आँखा रसाएका छन् । सोमवार प्रसारण गरिएको रियालिटी शो ‘अमेरिकन आइडल’ मा दिवेशले गीत गाउँदा जजहरुले उठेर सम्मान दिएका थिए । उत्क...
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार २३:१४ Highway KhabarLeaveaComment on कमेडी च्याम्पियनबाट बाहरिए सुमन कार्की, काे काे पुगे त उत्कृष्ट ४ मा ?
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार २२:४६ Highway KhabarLeaveaComment on रामेछाप महोत्सवको तयारी पुरा, मन्त्री ढुंगेलले उदघाटन गर्ने
रामेछाप । फागुन ६ गतेबाट रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजना हुने दोस्रो रामेछाप महोत्सवको उदघाटन बागमती प्रशेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले गर्नुहुने भएको छ । उहाँले दोस्रो रामेछाप कृषि, पर्यटन, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक व्याप...
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार २२:३६ Highway KhabarLeaveaComment on रामेछापका दोहोरी गायक प्रकाश कटुवाल पक्राउ …
काठमाडौं । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक प्रकाश कटुवाललाई तनहुँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बन्दिपुर डुम्रेका होटल सञ्चालक लालकाजी गुरुङमाथि आ’क्र मण गरेको अभियोगमा गायक कटुवाल प’क्राउ परेका हुन् । काठमाडौं बाट पोखरा जाने क्रममा शनिबार बाटोमा गायक...
२९ माघ २०७६, बुधबार २३:०५ Highway KhabarLeaveaComment on गौतम बुद्ध रंगशालामा सुन्तली र सन्दिपको झगडा परेपछि….
फिल्म ‘सेन्टि भाइरस’को ‘प्रमोश्नल सङ’ छायांकन गरिएको छ । पार्टी जिताइदे बोलको गीतको सोमबार चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला परिसरमा छायांकन गरिएको हो । रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ फागुन ९ गतेदेख...
७ माघ २०७६, मंगलवार १९:५५ Highway KhabarLeaveaComment on ए मेरो हजुर ४ मा सलोन फाइनल
काठमाडाैं । झरना थापाको निर्देशनमा बन्ने चलचित्र 'ए मेरो हजुर ४'को लागी कलाकार फाइनल गर्ने काम भइरहेको छ । गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको 'ए मेरो हजुर ३'बाट दर्शकको अपार माया पाएपछि झरनाले चलचित्र 'ए मेरो हजुर ४' को निर्माण गर्ने भएकी हुन् । 'ए मेरो हजुर' ...
६ माघ २०७६, सोमबार ०८:०६ Highway KhabarLeaveaComment on सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्ने भक्तपुरकाे बतासे डाँडामा नगरकोट महोत्सव हुने
भक्तपुर । प्राकृतिक सम्पदा कला र संस्कृति, पर्यटनको विकास नगरकोटको उन्नति’ भन्ने मूल नाराका साथ पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन दोस्रो नगरकोट महोत्सव हुने भएको छ । नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिको संयोजनमा यही माघ १०, ११ र १२ गते बतासे डाँडामा ह...
कस्ता महिला बढी सेक्सी हुन्छन् ? पढ्नुहोस्
२८ पुष २०७६, सोमबार २१:२१ Highway KhabarLeaveaComment on कस्ता महिला बढी सेक्सी हुन्छन् ? पढ्नुहोस्
एजेन्सी । महिलाको व्यक्तित्व जान्ने इच्छा हरेक व्यक्तिमा हुने गर्दछ। आकृति विज्ञान एउटा यस्तो अध्ययन हो जुन शरीरको अंग तथा चालढालबाट व्यक्तित्वको परिचय दिने गर्दछ। यहाँ हामीले पनि आँखा र नाकको बनावटबाट कसरी महिलाको व्यक्तित्व जान्न सकिन्छ भन्ने व...